Bilow shirkad gaar kuu ah inta lagu jiro wakhtiga magan-gelyo doonka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / In la shaqeeyo xilliga wakhtiga magan-gelyada / Bilow shirkad gaar kuu ah inta lagu jiro wakhtiga magan-gelyo doonka
Adigu waad bilaabi kartaa shirkad gaar kuu ah inta lagu jiro wakhtiga adigu aad tahay magan-gelyo doon.
Si loo bilaabo shirkad gaar kuu ah waxaa khasab ah in adiga:
Laguu ansaxiyay canshuurta shirkadaha. Tani waxaa lagu magacaabaa F-skatt.
Haysato lambarka isku dubaridka
Canshuurta shirkadaha waxaa loo soo gaabiyaa F-skatt. Shirkadaha oo dhan waa inay haystaan oggolaanshaha F-skatt lagana helo Hey'adda Canshuuraha. Waxaad bogga intarnatka ee Hey'adda Canshuraha ka codsan kartaa in laguu oggolaado F-skatt.
Lambarka isku dubaridka
Lambarka isku dubaridka waa nooc ah lambarka shakhsiga oo ku meel gaar ah. Adigu laf ahaantaada ma codsan kartid lambarka isku dubaridka. Haddii aad F-skatt ka codsatid Hey'adda Canshuuraha waxay Hey'adda Canshuuruhu kuu codsan kartaa lambarka isku dubaridka.
Magan-gelyo doonka shirkadlayda ahi ma codsan karaan sharci shaqo
Haddii aad bilowday shirkad gaar kuu ah wakhtigii aad ahayd magan-gelyo doonka ma codsan kartid sharci shaqo haddii aad heshay diidmada codsigaagi magan-gelyo. Haddii aad shaqaale ka soo ahayd gudaha Iswiidhan wakhtigii aad ahayd magan-gelyo doonka waxaad markaas codsan kartaa sharci shaqo xitaa haddii aad heshay diidmo dhinaca codsigaagi magan-gelyo doonka.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan in la codsado sharci shaqo haddii aad heshay diidmo dhinaca codsigaagi magan-gelyo.
Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan in shirkad gaar ah laga bilaabo Iswiidhan
Akhriso dheeraad ku saabsan in la bilaabo shirkad oo ku taala bogga verksamt.se. Boggan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi. Akhriso dheeraad ku saabsan in magan-gelyo doon ahaan shirkad la bilaabo kuna qoran buuga yar ee Starta företag i Sverige.